Ukufihla – iAfrika
IsiZulu sakithi sisifunza umthamo othi awube mningi ngolwazi lwethu kanti ke nokhezo esikha ngalo kulembiza yethu yesintu sakithi nalo ithe xaxa ngoba phela umphako wethu ngezithinta isintu awubaleki nokwenani njengazo izinyawo zeshongololo impela. Sizwe sikaPhunga noMageba sithi ake siyiphule embizeni lenyama yomhlubulo enonile siyethele ezithebeni siyiphakele isizwe sethu, kuleli khasi ksithi ake silobe ngendaba yokufihlela … Read more
Kuningi esikufundayo ngomlando wakithi okuhinta izinto eziningi ezahlukahlukene okubalwa kuzo amasiko, usikompilo, imikhokha nokunye njalonjalo ngoba sinomthamo wezinto thina sizwesika Phunga noMageba. Sekuyinsakavukela ukuzwa abantu uma bekhuluma ngesifo esehlele umuzi othile noma ukuba khona kwethunzi elimnyama esibongweni thizeni kube khona oya kwelamathongo uzwe bethi “usesishiyile ulibhekise kwagoqanyawo”. Alikho iphutha ngenkulumo enjalo kodwa ke akusiyona inkulumo … Read more
Tags Kwagoqanyawo, Ukufihla
Ukuhamba komuntu emhlabeni kuba isilonda esingapholi kubantu bakubo abamthandayo kanye nezihlobo zakhe. Ngisho nakade kungabantu abephila nabo ngesikhathi sokuphila kwakhe basala begqemeke ingozi engeqiwa ntwana ngokudlula kwakhe emhlabeni. Uma ke sesifikile leso simo sokuthi umuntu usedlulile emhlabeni kuyaphoqa ukuthi kudlulelwe esigabeni esilandelayo esibizwa ngokuthi ukufihlwa kwakhe noma ngamanye amazwi kumele angcwatshwe. Ukufihla komdabu kwasendulo nokufihla … Read more